Madaxweyne Siilaanyo Oo Soo Gabogabeeyay Tartanka Ciyaaraha Gobolada Una Bushaareeyey Reer Sool | FooreNews
Home wararka Madaxweyne Siilaanyo Oo Soo Gabogabeeyay Tartanka Ciyaaraha Gobolada Una Bushaareeyey Reer Sool
Madaxweyne Siilaanyo Oo Soo Gabogabeeyay Tartanka Ciyaaraha Gobolada Una Bushaareeyey Reer Sool
Burco (Foore)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa shalay galab xulka Gobolka Maroodi jeex gudoonsiiyay koobabkii kubaddaha cagta iyo kollayga ee ciyaaraha gobolada Somaliland ee ka socday magaalada Burco oo shalay lagu soo gabogabeeyay garoonka Alamsey ee magaalada Burco.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud oo ciyaartii shalay kadib hadal ka jeediyay garoonka ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tartanka ciyaaraha goboladda dalka, waxaanu yidhi “Waxaan hambalyo u dirayaa ciyaartoygii xulalkii goboladdii ka soo qeyb galay tartanka ciyaaraha goboladda ee meel kastaba iskugu yimid, dadweynihii taageerayay ee xamaasadooda iyo jacaylka ciyaaraha ay u muujiyeen. Waxaan aad iyo aad ugu faanaynaa in dhalinyaradii Somaliland ay ciyaarihii iyo niyad wanaagii u soo jeedsatay.” Madaxweynuhu waxa uu ammaan u soo jeediyay heerkii ciyaareed ee ay gaadheen xulka kubadda cagta ee gobolak Sool oo uu ugu bushaareeyey in xukuumaddiisu garoomo u dhisi doonto dhiirri gelin weyna u fiidn doonto dhallinyarada gobolka Sool ee reer Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland wuxuu sheegay in horumarinta ciyaaruhu yihiin qodobadii ay xukuumadiisu balan qaaday, waxaanu yidhi “Waxyaabihii aanu balan qaadnay markii aanu xisbiga KULMIYE ahayn in haddii aanu talladda qabano inaanu ciyaaraha dalka horumarino oo dhalinyaradda dhiiri gelino. Tallaabooyinkaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha aanu qabanay. Waxa kale oo aanu wax ka qaban arrimo badan oo ay waxbarashadu ka mid tahay.”
“Waxaanu balan qaadaynaa inaynu horumarinta ciyaaraha intaasi ka sii kordhino oo aanu garoomadda, waxaan balan qaadaynaa kooxda ka timid gobolka Sool oo si aad iyo aad u fiican ciyaartay oo dedaal muujinay inaanu garoomadda u dhisno ayaanu u balan qaadaynaa,”ayuu yidhi Madaxweyne Axmed Siilaanyo.
Madaxweynuhu wuxuu hambalyeeyay labadii xul ee iskugu soo baxay ciyaartii kama dambaysta ee Maroodijeex iyo Hawd.
“Waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa labadii kooxood ee ciyaaray final-ka, waxaan hambalyeynayaa kooxdii guulaysatay iyo kooxdii laga guulaystayba waxaanan u rajaynayaa guul. Tartankan ciyaaraha waxaanu ka soo daawanaynay TV-ga adduunka oo dhana waa laga daawanayay,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Madaxweynuhu wuxuu ciyaartoyga xulka Gobolka Maroodijeex gudoon siiyay biladdo iyo koobabkii kubaddaha cagta iyo Kollayga oo ay labadaba isku darsadeen, halka xulka Gobolka Hawdna la gudoon siiyay koobkii kaalinta labaad ee tartankii kubaddaha cagta iyo kollaygaba.
Sidoo kale, waxa madaxweynuhu uu shahaado sharaf gudoon siiyay shirkada isgaadhsiinta ee SOMTEL, oo ku mutaysatay siday TV-yada iyo Idaacadda Radio Hargeysa uga gacan siisay khadka Internet-ka iyo isgaadhsiinta ee lagu sida tooska ah loogu soo tabinayay ciyaaraha goboladda.
Tartankan waxa xukuumaddu ay siisay ahmiyad weyn iyadoo uu Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxman Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) uu si rasmi ah u furay 1-dii bishan, iyadoo madaxweyne Siilaanyo oo ay weheliyaan wasiirro badan iyo marwada koowaadna ay soo gabogabeeyeen shalay.
Previous PostFADEEXADAHA MUSUQMAASUQ EE KA JIRA HAYADA FAO SOMALIA/SOMALILAND IYO MOOGANAANTA XUKUMADA SOMALILAND Qaybtii II aad Next PostGuddoomiyaha Urur-Diimeedka Xisbullaahi Oo Somaliland Ku Tilmaamay Meel Caddaaladdu Ku Yar Tahay Gaalona Xukunto